Haddii aad welwel qabtid - Krisinformation.se
TB5 Oro So
Waa wax caadi ah in la dareemo welwel, niyad jab ama cadaadis inta lagu jiro xaaladda adag. Dad badan waxay dareemayaan welwel caafimaadkooda ama xaaladdooda nololeed la xiriira, ama waxaa laga yaabaa in ay u welwelsanyihiin caafimaadka ama nolosha cid kale. Boggan waxan kuugu ururinnay adigaaga welwelka dareemaya ama raba in aad ogaatid sida aad u daryeeli kartid caafimaadkaaga iyo kan dadka kale ee xagga maskaxda la xiriira inta waqtigan lagu jiro.
Uppdaterades 27 jan 2021 16:48
Haddii aad welwel dareemeysid feyruska corona awgiis
Marka aan yareyno xiriirka aan dadka kale la leennahay waxay taasi keeni kartaa in aan dareenno kelinimo, niyad jab iyo welwel. Waxaan sidoo kale dareemi karnaa welwel iyo baqdin ka qabi karnaa in nala qaadsiiyo feyruska ama in la qaadsiiyo cid xigtadeenna ka mid ah. Isbeddellada ka dhex dhaca bulshada ee uu cudurkan dillaacay keenayo, waxay dad badan u keeni karaan welwel iyo jihawareen iyo dareen xoog badan oo ku aaddan in aanan ogeyn sida xaaladdu u sii soconeyso. Markaas waxaa fiican in la xasuusto in xaaladda laga gudbayo.
Dadka oo dhan siyaabo kala duduwan ayey waqtiyada welwelka uga falceliyaan. Haddii aad dareemeysid welwel aad u badan, niyad jab, ay kugu adagtahay in aad huruddid ama aysan maskaxdaada ka baxeynin fikradaha ku aaddan feyruska, waxaa jira dhawr waxyaabood oo aad sameyn kartid si aad u maareysid welwelkaaga iyo cadaadiska.
Intii suurta gal ah sii wado ruutiinyadaadi caadiga ahaa.
Isku day in aad ku mashquushid waxyaabo aad wacnaan ku dareemeysid.
Haddii aad dareemeysid in wararku ay welwel ku sii gelinayaan ama ay wacnaashadaada wax u dhimayaan - isku day in aad yareysid waqtiga aad daawatid ama dhegeysatid wararka iyo waqtiga aad adeegsatid baraha bulshada.
Waqtiyada ay xaaladaha ad-adagi jiraan waxaa la faafiyaa macluumaad aad u khaldan oo welwelka gacan ka geysanaya. Waa muhiim in aad macluumaadkaaga ku saabsan covid-19 ka soo qaadatid ilo lagu kalsoonyahay.
Ka hadal welwelkaaga iyo sida aad dareemeysid
Waxaa muhiim ah in aad ka hadashid welwelkaaga. Cid aad ku kalsoontihid la hadal ee u sheeg sida aad dareemeysid. Haddii aad sii jeclaan lahayd in aad la hadashid cid dadkaaga ka baxsan waxaa jira ururro badan oo khadka taleefanka, wadasheekeysiga intarneetka ama e-mail taageero ku bixiya.
Bogga Laanqeyrta Cas waxaad ka heli kartaa talo ku aaddan sida aad isu caawin kartid marka ay cabsido kaa badato. Laanqeyrta Cas waxay sidoo kale furtay khad taleefan oo taageero ah halkaas oo aad wici kartid haddii aad cadaadis iyo welwel ka dareemeysid dillaacidda feyruska cusub ee corona: 0771-900 800. Taleefanka taageeradu wuxuu furanyahay maalmaha shaqada inta u dhexeysa saacadaha: 12-16.
Waxaad la xiriiri kartaa baadariga heeganka leh adigoo adeegsanaya khadka qoraal kula sheekeysiga Kaniisadda Iswiidhishka ama adigoo warqad digital ah u diraya Kaniisadda Iswiidhishka. Waxaa baadariga heeganka leh laga heli karaa xitaa taleefan nambarka 112.
Bani’aadamka heeganka leh
Waxaad bani’aadamka heeganka ku jira ka wixi kartaa 08-702 16 80 habeen walba inta u dhexeysaa saacadaha 21-06.
Ururka Mind – ee loogu tala galay caafimaadka xagga maskaxda
Mind waxaad ka ag heli karaa khadad taleefan oo fara badan iyo khadad qoraal ku sheekeysi haddii aad u baahantihid in aad cid la warrantid:
Khadka dadka raba in ay is dilaan. Khadka dadka raba in ay is dilaan qof ayaad kala hadli kartaa haddii aad ku fikireysid in aad nafta iska goysid ama aad leedihid xigto sidaas ku fikireysa. Waxay caawimaad kugu siinayaan khadka taleefanka: 90101 iyo Khadka qoraal ku sheekeysiga dadka raba in ay is dilaan. Waxaad xitaa e-mail u diri kartaa Khadka dadka raba in ay is dilaan.
Khadka dadka da’da ah. Adigaaga 65 sano ka weyn, una baahan cid aad la hadashid waxaad wici kartaa Khadka dadka da’da ah ee taleefan nambarka: 020-22 22 33, maalmaha shaqada saacadaha 8-19, fasaxyadana saacadaha 10-16.
Khadka waaliddiinta. Haddii aad u welwelsantahay canuggaaga ama canug kaa ag dhaw waxaad Khadka waaliddiinta ka wici kartaa taleefan nambarka: 020-85 20 00, maalmaha shaqada inta u dhexeysa saacadaha 10-15 iyo maalmaha khamiista 19-21.
Badbaadi Carruurtu waxay heysaa macluumaad la ururiyay oo ku saabsan sida welwelka feyruska corona looga yareyn karo carruurta iyo waaliddiinta.
Hawsha caafimaadka maskaxda
Bogga degmooyinka iyo goballada Iswiidhan ee Hawsha caafimaadka maskaxda waxaa ku jira macluumaad ku aaddan sida aad ku heli kartid taageero iyo caawimaad ku aaddan sida aad u dhawran kartid caafimaadka maskaxda inta lagu jiro xaaladda adag ee iminka taagan. Macluumaadka waxaa loogu tala galay carruurta, dhallinyarada, dadka waaweyn iyo dadka da’da ah intaba.
Hawsha caafimaadka maskaxda waxaad ka ag heleysaa talooyin wax walba ku saabsan, laga billaabo xilliga firaaqada ee digitalka iyo cashar ka caawin carruur oo digital ah, ilaa iyo sida dadka da’da ah ay u heli karaan nolol maalmeed micno leh, una maareyn karaan welwelkooda.
Keli ahaanshadu waxay kor u qaadi kartaa gacan isu qaadidda dadka xiriirka qoysnimo ka dhexeeyo
Waxaan isu keliyeyneynaa si aan u yareyno faafitaanka cudurka covid-19. Keli ahaanshadu waxay isla mar ahaantaas kor u qaadeysaa gacan isu qaadidda dadka xiriirka qoysnimo ka dhexeeyo, waana ay adkaan kartaa in aad caawimaad raadsatid marka aad meel keligaa ku tahay.
Haddii ay taasi kugu dhacdo waxaa markaa tusaale ahaan jira Khadka heeganka nabadda dumarka: 020-50 50 50.
Hey’adda sinnaanta ragga iyo dumarka waxaa loo xil saaray in, iyadoo maskaxda ku haysa covid-19, ay hesho qaab shaqo oo ay degmooyinku adeegsan karaan. Waxay taasi ku saabsantahay in degmooyinku ay awoodi karaan in ay faafiyaan macluumaadka ku aaddan gacan isu qaadka dadka uu xiriirka qoysnimo ka dhexeeyo, gacan qaadka sharafta iyo cabburinta la xiriira halkaas oo sidoo kale la doonayo in xiriir lala sameysto dadka dhibaatada u nugul.
Ku saabsan gacan qaadka iyo covid-19, Hey’adda sinnaanta ragga iyo dumarka agteeda.